Ụlọ Ahịa Kacha mma - naanị taa - ỊDỌ AKA NA NTỊ Nkwalite (-55%)
ihe ngosi a ma ama nke ọma na ihe osise
ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ nke na-esi n'ebe dị anya kwuo
nke ndị dị elu ma dị mma nke ndị na-eyi ha - anyị na-enye ha niile
nke a na ụlọ ahịa anyị na ihe ndị ọzọ.
Uwe na akpụkpọ ụkwụ abụghị naanị uwe mpempe, ejiji na nche dị iche iche abụghị naanị ihe ụfọdụ dị mma, nke anyị na-eyi ụbọchị ọ bụla, nke anyị na-egosipụtakwa echiche anyị banyere ejiji na ịdị mma. N'ọtụtụ obodo, ndị a bụ ihe ngosi nke ùgwù, ọnọdụ dị elu ma ọ bụ nanị ịmara onwe onye nke ndị na-eyi ha, ndị na-agbaso usoro na ejiji ejiji, mara mma ma nwee ezi uche. Ka o sina dị, ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-enwe ike ịzụta uwe, akpa, iko ma ọ bụ wallets kpọmkwem site na ndị na-emepụta ihe. N'ọnọdụ ndị dị otú a, nnukwu ngwọta bụ iji ohere ndị e nyere site na mpempe akwụkwọ, akpụkpọ ụkwụ, nche, wdg. Ha niile bụ ihe kachasị mma, nke zuru oke maka iji ya kwa ụbọchị. N'elu ihe ndị ọzọ, ha na-agbapụta obere site n'aka ndị ha na mbụ ha si n'aka ndị na-emeputa ihe ma ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịdị iche na nke mbụ. N'ụlọ ahịa anyị, ị ga-ahụ ihe nkedo nke uwe na akpụkpọ ụkwụ, ihe ịchọ mma dịka mkpu na ihe ịchọ mma, yana ụdị ejiji nke ndị inyom: ihe eji eme akpa, iko na wallets. Anyị na-enye ihe ndị ọzọ a maara nke ọma dịka Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani na Moschino. Anyị na-akpọ gị òkù ịmatakwu nkọwa zuru ezu na weebụsaịtị.
Ha na-eje ozi abụọ, nchebe site na anyanwụ dị ukwuu na ihe ndị ọzọ na-ahụ anya na anya anyị. Kedu ihe ha bụ? Anya ugogbe anya, n'ezie. Omuma, ọdịdị ọdịdị ọdịdị nke ugogbe anya maka anwụ na-agafeghachi n'ụzọ. Site na ileta ụlọ ahịa na ngwugwu ugogbe anya maka ya, nke nwere onyinye bara ọgaranya, ị nwere ike ịnweta akara nke ụdị ndị a ma ama na ndị na-emepụta nkwanye ùgwù: anyị na-ekwenye na ọnụahịa dị ala, nhọrọ nhọrọ mara mma na ọrụ ọrụ. N'inye anyị, e nwere ihe nchịkọta obi Chrome, nke a ma ama na West, yana ụdị ndị ọzọ a ma ama, dị ka cartier, Bylgari, Versace, Ray Ban, nakwa, n'ezie, Dior na Glassino. A na - eji nlezianya ahọrọ ihe ndị a niile ma họrọ site na narị otu narị ụdị dị iche iche dị na ahịa. Eleewo ma gosipụta àgwà ha, ọ bụ otú ahụ ka anyị si enye ngwaahịa ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Ngwongwo ọ bụla a na-egbuke egbugbere ọnụ bụ DITA, Miu Miu ma ọ bụ Roberto Cavall bụ ihe mmesi obi ike nke ihe onwunwe na mmepụta. Onyinye zuru oke anyị dị kpọmkwem na weebụsaịtị https://get2lux.cn/en/123-glasses
Enwere ike ịzụta ngwaahịa dị elu na ọnụahịa dị ala karịa na ụlọ ahịa echekwa ma ọ bụ na ụlọ ahịa ndị ahịa? Ị nwere ike ịzụta otu ngwaahịa ahụ, nke bụ ọkwa kachasị ọhụrụ na ahịa ma nke sitere na ndị na-emepụta ụwa dịka Chloe, Louis Vuitton ma ọ bụ Gucci? N'ezie, ị nwere ike, ma ọ bụrụ na kama nke mbụ ahụ, ị ​​na-enwe afọ ojuju na akpa ego, nke, n'agbanyeghị na ya na-abụghị isi mmalite, apụtaghị obere uru na obere mma. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị na-eto eto ụwa na-ekweta na ha na-eji akara aka nke ndị a ma ama na ndị na-emepụta ihe. Ọbụna na Poland, ọtụtụ ndị si na igwe onyonyo anya adịghị ezo na ha wodrobu nwere ihe karịrị otu oyiri nke Prada Akpa, Michael Kors, Miu Miu ma ọ bụ Valentino handbags. Ebe ọ bụ na nke a bụ ihe a na-ahụkarị na nke doro anya n'oge a, gịnị kpatara na ọ gaghị emetụta onye ọ bụla nọ n'okporo ámá? Ụlọ ahịa anyị na akpa ego bụ azịza nke ngwa ngwa na-arịwanye elu nke ndị na-emepụta ihe a ma ama, ma n'ọtụtụ dị ala na nke mara mma karị. Anyị na-enye otu nhọrọ dị iche iche nke ngwongwo site na ndị mmepụta kachasị mma ma na-enye anyị afọ ojuju 100%. Ihe eji eme ihe dị iche iche, ihe ndị a mara mma, ihe ịchọ mma na ihe ịchọ mma na - enweghị atụ - wallets sitere na ndị na - emepụta ụwa na ụdị ejiji na - emepụta ọ bụghị naanị site na oke mma nke ngwaahịa ahụ, kamakwa ihe pụrụ iche, nke a na - adịghị ahụkebe. A naghị enwekarị maka akpa nke Pole mgbe niile, nke ahụ bụ mgbe a na-enye ihe enyemaka site na oyiri nke Celine, Gucci, Louis Vuitoon ma ọ bụ obere akpa Burberry. A na-ahụ ụdị ndị ahụ, na ọtụtụ ndị ọzọ, na ụlọ ahịa anyị. Ihe eji eji akpa akwa adịghị iche na ụdị ngwaahịa ma ọ bụ ihe sitere na mmalite: ha na-eji ya ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, mgbe ị na-echekwa ihe ngosi ahụ pụrụ iche. N'ihi nke ahụ, ụdị ọ bụla dị iche iche na-enweghị ike ịgụta ihe site na mbụ ma zuo oke maka onye ọ bụla nke na-ahụ maka ọdịdị dị mma, ụdị na ịdị mma. Ntughari Christian Louboutin pụrụ iche bụ nnukwu ihe onyinye na-atụghị anya ya na a ga-enwe ekele. N'enye anyị, ị ga-ahụ wallets maka ma ndị nwoke ma ndị inyom, a pụkwara ịchọta onyinye zuru oke na ebe nrụọrụ weebụ na ụlọ ahịa dị n'okpuru adreesị na-esonụ https://get2lux.cn/en/120-wallets
Enwere eziokwu ụfọdụ na nkwupụta ahụ bụ na akpụkpọ ụkwụ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke uwe ejiji kwa ụbọchị maka nwanyị. O kwesịghị iju onye ọ bụla anya, na ndị inyom na-eme ike ha ọ bụghị naanị na ha nwere akwa akpụkpọ ụkwụ na uwe ha, kamakwa ha chọrọ inwe ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ ụdị ejiji, ejiji ma mara mma. Ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ha si n'aka Nsukkapụta ndị nọ n'ụwa ejiji akpụkpọ ụkwụ nwere aha ọma. E nwekwara, n'etiti ndị ọzọ, ụlọ ọrụ a ma ama na ụwa dịka: Christian Louboutin, Gucci, Converse Coca & Cola, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Yeezy na Prada. N'ezie, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ si n'aka ndị na-emepụta ngwaahịa a nwere ike ịchọta ngwa ngwa n'ahịa n'ahịa dị nta ma bụrụ ndị mara mma karị, ebe àgwà, ịrụ ọrụ, ogologo oge, ịdị mma na nkasi obi nke akpụkpọ ụkwụ dị otú ahụ ka na-eguzo n'ọkwa dị elu. Ụdị akpụkpọ ụkwụ Gucci, akpụkpọ ụkwụ LV ma ọ bụ Prada bụ mmeghachi omume nke mkpa ndị ahịa site na gburugburu ụwa bụ ndị na-enwe ekele maka nkata ndị mara mma nke akpụkpọ ụkwụ na-ewu ewu ma n'otu oge ahụ maara nnukwu ùgwù nke ejikọta ya na ihe onwunwe ya. Anyị na-akpọ gị òkù ka ịzụta ihe ndị akpụkpọ ụkwụ na ibe weebụ
Ihe ngosi a gosipụtara na label ma ọ bụ akara a na-ahụ anya nke onye na-emepụta ụwa n'ụwa na uwe na ọtụtụ obodo bụ akara aka nke okomoko, akụ na ụba. Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa iji ọtụtụ narị mmadụ ma ọ bụ na ikpe ndị dị oke njọ ọbụna ọtụtụ puku złotys ka ha yi uwe elu ma ọ bụ n'èzí ma ọ bụ ka ha yie uwe nke ihe nkiri ndị nkiri America na-eyi. Ndị ahụ nwere ike iji ihe eji ejiji na-edozi ya, ma ọ bụ nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma na ihe dị elu. Otu n'ime ihe ndị e dere na ọtụtụ afọ bụ ndị kasị ewu ewu na ụwa, ụdị n'elu bụ: Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Louis Vuitton na Casadei. Ekwesiri ịkọwa, nke ahụ dịkwa ịrịba ama bụ nchọpụta ndị ọhụrụ nke ahịa ahịa na mpaghara nke uwe mara mma, ntụgharị nke ndị Chanel, Emporio Armani, Hamis na Givenchy. Ihe eji eme ihe bụ ihe ngwọta dị mma maka ndị na-eji ego na akụnụba nke aka ha akpọrọ ihe, ma ha chọrọ iyi akwa ndị dị mma, ogologo oge, nke a na-ahazi, nke mara mma ma dị mma, nke ga-arụ ọrụ nke ọma na salons na azụmahịa nzukọ na ndị ahịa na ndị ọrụ ngo. Ozi zuru oke banyere onyinye anyị nwere ike ịchọta na https://get2lux.cn/en/115- ihe ọ bụla ihe ọ bụla
Ihe ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha ndị na-egbuke egbuke, ntị, aka ma ọ bụ nkwojiaka nke ụmụ nwanyị gburugburu ụwa, ma ọ bụ, onye ọ bụla mara, ọla, aghọwo ihe dị iche iche nke uwe ọtụtụ puku afọ gara aga. N'oge a, otu n'ime ihe ndị dị ebube bụ ihe ndị e ji emepụta ihe site na ọnụahịa ndị kasị elu, na-abịa site na ụlọ ọrụ ndị a maara nke ọma ma mee ya, karịsịa ụdị nke Tiffany & Co, Chanel na Bvlgari. Ịme ihe ngosi nke ụdị ndị ahụ aghọwo ihe zuru ụwa ọnụ, ọ bụghịzi okwu nke esemokwu, n'ezie ọ bụghị ihere. A na - eji ihe eji eme ihe emepụta ọ bụghị nanị site na ndị nkịtị, kamakwa kpakpando ụwa, ndị na - eme ihe nkiri na ndị ọbụ abụ. N'ịga n'ihu na mgbe ụfọdụ, ndị uwe ojii, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịsịa, na-ahọrọ ụdị ihe ejiji ndị ikom, bụ ndị ọ na-abụkarị ohere ịnweta akwa pụrụ iche ma ọ bụ nke mbụ ma ọ bụ ntinye aka. Mgbe ị na-elele ụlọ ahịa ndị na-emepụta ọla anyị, site na ụdị dịka Dior, Piaget ma ọ bụ Louis Vuitton, ị nwere ike ịchọta oke nhọrọ nke ọla ntị dị iche iche, pendants, necklaces, rings and everything every woman needs. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị hụ ụlọ ahịa anyị na Ịhụ oge nke oge bụ nsogbu a maara site n'oge ochie, ma ọ bụ naanị narị afọ abụọ gara aga ka e mepụtara mgbagwoju anya na ụdị ha ugbu a. Ugbu a, ha abughi nani ngwa bara uru, kamakwa ezigbo echiche maka onyinye na-adọrọ mmasị. Ọbụna ma ọ bụrụ na onyinye a bụ oyiri Rolex anya, ọ bụghị nke mbụ, ọ bara uru ọbụna ọtụtụ puku dollar. Mgbe ị na-ekpebi ịzụta oyiri, ọ dị mkpa ka ị mara eziokwu ahụ na ọ bụghị ngwaahịa na-abịa ngwa ngwa site n'aka onye nrụpụta, kama ọ bụ ọkachamara nke ọma ma jiri nlezianya meepụta ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe nile Emporio Armani nke nche na-enye anyị dị nso nke mbụ dị ka o kwere mee, na-yikarị ya na ihe ọ bụla. Otú ahụ ka ọ dịkwa maka ụdị ndị ọzọ: Cartier, Hublot, U-ụgbọ mmiri, TAG Heuer, BREITLING, na ọbụna Rachard Mille. Lelee ihe ndị a na-enye ndị ahịa anyị, ndị kachasị ewu ewu na ejiji. Itinye ha pụtara ịcha mma na ịke, na, n'otu oge ahụ, ịzụta anaghị ehichapụ ego ndị ahịa na narị afọ gara aga. Ndị mmadụ nwere mmasị ịmara nkọwa zuru ezu nke ụdị elekere ndị dị na ụlọ ahịa ahụ na-akpọ gị gaa na https://get2lux.cn/en/127-watches